Kooxdii Asmara maanta waa Kenya | allsanaag
Kooxdii Asmara maanta waa Kenya
Cali Yare iyo Sakariye Xaaji, oo hadda taageera Farmaajo, horayna u taageeri jiray Ururkii Argagixisada ahaa ee Isbaheysiga Dib u xoreynta Soomaaliya oo markii danbe noqday Maxaakiimta, kana sii noqday Alshabaabka aynu manta naqaano . Ururkaas oo Askartii Puntland laga qaaday ee la socday madaxweyne Cabdulaahi Yusuf intay Muqdisho ku dilaan dhulka ku jiidi jiray iyaga oo ku sheegi jiray inay Itoobiyaan yihiin ama taageeraan, ayaa Sakariye Xaaji cabdi wuxuu ka mid ahaa madaxda uGu saraysa
Sawirka kore waa Askari Puntland ka tegay oo la dilay xilligii Cabdulaahi Yuusuf Allah ha u naxariistee uu raadinayey Qaranimo Soomaaliyeed
Kalla jecleesiga wadamada Safka hore oo Sakariye Asmara, hadda leeyahay waa inaan qoryaha u qaadano oo Kenya iska xoreynaa sidoo kale xildhibaan Idris oo ah Ammxaar af Soomaali ku hadla oo Nabad iyo Nolol ay ka dhigtay xildhibaan baa isna ereyo xanaf leh ku hadlaya.
Waxaa la gaaray xiligi guulwadayaasha NN hurdada laga toosin jirey sidii Maxaakimta iyo Isbahaysigi Asmara ee lagaga soo horjeeday Allah ha u naxariistee C/laahiYuusuf . Talada uGu fiican ee Soomaali qaadan karto, marka laga yimaado kuwa la midka ah Sakariye Xaaji oo ahaa ku xigeenka kowaad ee gudiga fulinta ee Isbaheysiga Dib u xoreynta Soomaaliya ee Xaruntoodu ahayd Asmara Eretereiya, waa inaan la kala jecleesan shisheeye oo Soomaali iska wada saaraan wadamada safka hore Itoobiya Jabuuti iyo Kenya ee ummadda yaan lagu wareeerin wadaniyad beena iyo xuduud beenaad weeye NFD
Hoos ka akhriso maalmihii dhalinyarada reer Puntland ay naftooda u hurayeen sidii Qaran Soomaaliyeed loo helo waxay qorayen Sakariye Asmara iyo Cali yare oo ah taageerayaasha uGu dhow madaxweyne Farmaajo
MIDOWGA ISBAHEYSIGA DIB U XUREYNTA JAMHUURIYADDA SOMALIYA OO NASOO GAARSIIYAY DHISMAHA CUSUB EE GOLAHA FULINTA. | Somali News Politics Documentaries Music Videos Intertainment
ISBAHAYSIGA DIB U XOREYNTA JAMHUURIYADDA SOOMAALIYA
Soomaaliya 20kii sano ee la soo dhaafay waxay ku jirtay colaad iyo dagaallo sokeeye oo aafeeyey ummadda, saameeyeyna nolosha bulshadda. Dadkii waxaa loo diiday nabadgelyo iyo nolol, waxaana laga hor istaagay in ay aayahooda ka tashadaan.
Wadankii wuxuu u kala googo’ay maamul goboleedyo iyo qaybo gacanta u galay hogaamiye kooxeedyo naxariis laawayaal ah. Inkastoo dalku dowlad la’aan ahaa, misna marna halis ma gelin qaranimadii iyo madaxbanaanidii ummadda Soomaaliyeed.
Duulaanka qaawan ee dowlada Itoobiya ay ku qabsatay Soomaaliya wuxuu khilaaf sanyahay dhammaan sharciyada caalamiga ah wuxuuna xadgudub ku yahay go’aanadii Golaha Amaanka.
Duulaankani oo ku xadgudbay madaxbanaanidii iyo qaranimadii Ummadda Soomaaliyeed waxaa dalka kusoo hogaamiyey hogaamiyey kooxeedyo ay dowladda Itoobiya u yagleeshay wadanka kuna sheegtay in ay dowlad Soomaaliyeed tahay.
Duulaanka dawladda Itoobiya wuxuu gaystay, dil, dhac, barakac, boob iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda bani’aadamka. Shacabka Soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan waxey arrinkan ka bixiyeen jawaab, waxayna ka mideysan yihiin in la sameeyo xoog heer qaran ah iyadoo xooggaga kala duwan ee bulshadda ay isku raaceen in ay mideeyaan maalka, maskaxda iyo muruqa Ummadda Soomaaliyeed si cadowga dalka looga xoreeyo, islamarkaana, Beesha Caalamka laga dhaadhiciyo qadiyada Ummadda Soomaliyeed ee dulman.
Waxaa la aasaasay isbahaysiga lamagac baxay Isbahaysi dib u Xoraynta Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 13/09/2007
1 Qeybta 1 Mabaadii’da iyo Ujeedooyinka Isbaheysiga QODOBKA 1 Magaca iyo qeexidda Isbaheysiga
1. Magaca Isbaheysigu waa Isbahaysiga Dib u Xoraynta Jamhuuriyadda Soomaaliyeed.
2. Isbaheysiga Dib u Xoreynta Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaa isku baheystey oo uu ka koobanyahay:
a) Barlamaanka Xorta Ah,
b) Golaha Midowga Maxaakiimta Islaamiga Soomaliyeed,
c) Qurbajoogta Soomaaliyed,
d) Bulshada Rayidka ah
e) iyo xubno Soomaalida dhexdeeda magac ku leh kuwaasoo isku raacay in ay isu geeyaan awooddooda maskaxeed, dhaqaale, ciidan, siyaasadeed iyo waxkasta oo karaankooda ah si ay marka hore dalka uga xoreeyaan cadowga Itoobiya oo kaashanayay quwado shisheeye ee sida sharci darada ah ku qabsaday dalka, kadibna ugu sammeeyaan dowlad caadil ah oo u adeegta dadka,diinta iyo dalka Soomaaliyeed.
3. Isbahaysigu wuxuu sii haynayaa xilka dalka marka uu xoreeyo muddo 3 sanno ah uu ku qaban-qaabinaayo doorashooyin xor ah oo madax banaan. QODOBKA 2 Shicaarka ama Astaanta Isbaheysiga.
Maro buluug ah oo dhexda ku leh xiddig cad iyo laba waran oo is dhaafsan oo salkooda kitaab kala furan saran yahay. Waxaana ku wareegsan labo laamood oo qumba ah oo salkoodu is dhaafsan yahay baarkooduna isku soo dhaw yahay.
QODOBKA 3 Xarunta Isbaheysiga
Xarunta Isbaheysigu waa Muqdisho Caasimadda Soomaaliya, wuxuuna laamo ka furanayaa gobollada dalka iyo dibadiisa.
QODOBKA 4 Luqada Isbaheysiga
Luqadda rasmiga ah ee isbaheysigu waa af-Soomaali iyo Carabi, iyadoo afafka kalena loo adeegsan doono hadba baahida loo qabo.
2 QODOBKA 5 Aragtida Isbaheysiga
Dib u dhiska Mujtamac Soomaaliyeed oo ka madaxbannaan qabyaaladda, lehna wacyi iyo garaad qarameed oo ku filan, garanaya waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa, kuna noolaada gobanimo buuxda, nabadgelyo, cadaalad iyo sinnaan.
QODOBKA 6 Ujeedooyinka Isbaheysiga
Dib u xoreynta dalka iyo dib u heshiisiin dhab ah oo u danaynaysa shacbiga soomaaliyeed, in la sugo nabadgelyada muwaadinka Soomaaliyeed, baaritaana lagu sameeyo danbiyadii laga galay ummadda, in sidoo kale wax loo qabto dadkii lagu barakiciyey duulaankii cadowga, isla markaasna loo dhiso dowlad u soo celisa shacabka Soomaaliyeed gobanimadiisa la lumiyey, taasoo dhowri doonto caqiidadiisa islaamiga ah, taariikhdiisa soo jireenka ah, dhaqankiisa suubban iyo hantida guud iyo tan gaarka ahba.
QODOBKA 7 Sida Isbaheysigu ku Gaarayo Ujeeddooyinkiisa
Fulinta iyo meel-marinta ujeedooyinka Isbahaysiga waxaa loo marayaa arrimaha hoos ku qoran:
1. Xoojinta muqaawamada iyo la dagalaanka cadowga si looga xoreeyo dalka.
2. Mideynta maskaxda, muruqa iyo maalka shacabaka Soomaaliyeed si meel looga soo wada jeesto cadowga dalka Soomaaliyeed xoogga ku haysta.
3. Wacyigelinta bulshadda, iyadoo laga faa’iidaysanayo aqoonyahanka, culimada, suugaanleeyda, iyo dadkeena khibradda cilmi iyo hogaaminba leh.
4. Soo bandhigidda dhibaatooyinka iyo tacadiyada uu geysanayo gumeystaha iyo kuwa la shaqeeya.
5. Wadahadallo nabadeed oo dhab ah in la galo si loo xalliyo dhibaatooyinka soo gaaray ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo maraayo dhabo sax ah.
6. Furida Xafiisyo iyo xarumo laga fidiyo siyaasadda Isbaheysiga, isla markaana loogu sharaxo qaddiyadda Shacabka soomaaliyeed ee dulman beesha caalamka, saaxiibadda Soomaaliya iyo inta nabadda jecel.
3 QODOBKA 8 Mabaadii’da Isbaheysiga
1. Ku dhaqanka shareecadda Islaamka.
2. In Midnimada, xoriyada iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee ummadda Soomaliyed ay tahay lama taabtaan.
3. In cadowga wadanka haysta laga saaro iyadoo loo marayo wada kasta oo suura gal ah.
4. In xalka Soomaalidu uu ku jiro in Soomaalida loo madax banneeyo arrimaheeda, lagana fogeeyo faragelinta shisheeye.
5. In la ilaaliyo dhaqanka Islaamka ee suuban ee Soomaalida.
6. Isbahaysigu wuxuu aaminsan yahay mabda’ah deris wanaagga, is-xurmeynta iyo xiriir wanaagsan oo lala yeesho dalalka deriska ah iyo caalamka intiisa kale.
7. Isbahaysigu wuxuu kasoo horjeedaa gumeysiga nooc kasta oo uu yahay, sidoo kale waxa uu diidan yahay xasuuqa, barakicinta iyo baabi’inta hantida shacabka Soomaaliyeed.
8. Isbahaysigu wuxuu aaminsanyahay hirgelinta mabda’ sinaan, cadaalad iyo wadaninimo wada gaarta shacabka Soomaaliyeed.
9. Xuriyaadka asaasiga ah waa xaq uu muwaadin kasta leeyahay mar haddii uusan ka hor imaanaynin shareecada islaamka.
10. Dib u dhiska dalka horumarintiisa, & abuuridda fursado shaqo oo daboola baahida shacabka uu u qabo arrimaha noocaan ah iyo u howlgelidda dowlad wanaag iyo xukun caadil ah.
11. Daryeelka maatada dhibku ka soo gaaray dagaaladii sokeeye iyo waxyeelada Cadowga dalka iyo dadkaba ku soo duulay.
4 Qeybta 2: Xubinnimadda
QODOBKA 9 Shuruudaha Xubinnimada Isbaheysiga
1. Waa in uu yahay Soomaali qaan gaar ah, una diyaar ah ka qayb qaadashada xaqiijinta ahdaafta isbahaysiga.
2. Waa in uu yahay ruux leh hufnaan kuna qanacsan mabaadi’da isbahaysiga iyo ujeedooyinkiisa una hogaansama nidaamkiisa iyo xeerarkiisa.
3. Waa in uu yahay qof u diyaar ah in uu naftiisa iyo maalkiisa u huro difaaca diintiisa, dadkiisa iyo dalkiisa.
4. Waa in uu u soo gudbiyo codsi maamulka Isbaheysiga goobta uu markaa degan yahay kuna soo lifaaqo caddeyn ku saabsan taariikh nololeedkiisa, islamarkaana ay soo gudbiyaan laba oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga helaanna ogolaashaha maamulka deegaankiisa.
5. Waa in uusan khatar galinayn diinta iyo dalka isla markaasna bixiyaa lacagta xubinnimada.
QODOBKA 10 Waayidda Xubinnimada
1. Inuu ka maqnaado saddex kulan oo is xigta cudurdaar la’aan qaybta uu ka tirsan yahay.
2. Inuu iskiis isku casilo.
3. In ay sugnaato in uu la yimaado xadgudub iyo dhaqan xumo aan ku banaanayn shareecada islaamka ama aan la socon karin ahdaafta iyo mabaadii’da isbahaysiga waxaana u furan maamulka in uu kala laabto xubinnimada haddii ay isku raacaan kalabar lagu daray hal ama 50 + 1(cod hal dheeri ah).
4. In uu bixin waayo qaaraanka xubinnimada ururka.
5. Ka mid noqosho isbahaysi leh ujeedooyin ka soo horjeeda kuwa isbahaysiga
5 Qeybta 3 Qaab dhismeedka Isbaheysiga
QODOBKA 11 Hay’adaha Isbaheysigu Waxay ka Kooban Yihiin
2. Golaha dhexe ee Isbahaysiga
3. Golaha Fullinta
QODOBKA 12 Shirweynaha iyo shaqadiisa
Shirweynuhu waa ergadda ka qeyb gasho shirka la isugu yeero dhammaan xubnaha Isbaheysiga ka kooban yahay sida midka hadda ka dhacay
Asmara, Eriterea, September 6-14, 2007, wuxuuna qabanayaa:
1. Ansixinta barnaamijka siyaasadeed iyo xeerka isbaheysiga.
2. Ansixinta xubnaha golaha dhexe ee Isbaheysiga
3. Marka ay dhamaato mudada uu shaqaynayo golaha dhexe oo ku siman 3 sano (13/09/2010), waxaa la isugu yeerayaa shirweyne ama kal fadhi lagu dooranayo Gole Dhexe.
sbahaysiga Dib u Xoreynta Somalia oo waftigii ugu cuslaa u diray Gudaha Dalka Som
Wafti ka socda Isbahaysiga dib u xoreynta Somalia oo soo cagadhigtay Magaalada
Kismaanyo.Wafdigii aad u balaaran oo ka socda Isbahaysiga Dib u xoreynta
Somalia,ahna kii ugu Cuslaa tan iyo intii lagu dhawaaqay Isbahaysiga ayaa ka
dhoofay Caasimada dalka Eratera ee Asmara, iyaga oo ku sii jeeda Gudaha dalka
Somalia, gaar ahaan Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka J/Hoose oo ay dhawaan
gacan ku heynta maamulkeeda la wareegeen.Wafdigan oo ka kooban 7 Xibnood oo kala
Sh Hassan Mahdi xoghayahacadaalada iyo garsoorka
Dr Mohamed Axmed Maxamed Dr Maxamed Dheere Xoghayaha
Dirshe axmed Wacays (diriye) Xoghayaha arimaha gudaha
Abdinaasir Seerer Maax
xogahayaha golaha dhexe Muse Abdi Arale
xogahayaha arimaha bulshadaMaxamed A Adeec
xoghayaha ku xigeenka dib u heshiisiinta. Ismail Xaaji Adow
xoghayaha daryeelka iyo arimahakheyriga
Wafidigaas ayaa waxaa lagu wadaa inuu kulumo isdaba joog ah la qaato Sh
Xassan Turki iyo maamulka 3 gobol. sidoo kale waxay gacan ka geysan doonaan
dhisitaanka maamulada la rajeynayo in laga sameeyo jubooyinka. sidoo wafdiga ayaa
ka wada dhambaalo khaas ah oo saaxib tinimo iyo shaqaba . Gudoomiyaha Isbahaysiga
Sh Hassan Dahir Aweys iyo Dr Cumar Imaan abu Bakar dhambaaladaas oo ah kuwa
khaaska ah waxa ay si toos ugu socdaan Sh Hassan Turki.Gudoomiyaha Isbahaysiga dib
u Xoreynta Somalia Sh: Xasan Dahir Aweys oo waftigan ku sii sagootiyay gagida
dayuuradaha ee magaalada Asmara ayaa sidoo kale Wafdigaas ku wareejiyay shixnado
daawooyin ah oo loo wado Isbatilka Kismaayo si loogu dabiibo dadka ku taabalaysan
gobolada Jubooyinka .
Sidoo kale Dr Mohamed Dheere oo ah xoghayaha Caafimaadka ahna dhaqtar waxuu si
mutadawacnimo ah u xoojin doonaa isla markaana gacan gacan ka geysan doonaa
Isbitaalka magaalada Kismaanyo oo la rajeynayo in mudo ah inuu ka shaqeyn doono
Isbitalka. Madaama ay dhaqaatiirta ku yartahay.Wafidigaas waxuu kaloo sharaxi doonaa
isbadelka ku dhacay Usbaheysiga iyo go, aanka adag ay gaaren in aysan la hadleynin
qolada ku biirtay Embagati ee ka leexday hadafkii Gobanimadoonka ahaa .
Cali Yare Stokcholm,Sweden.
← Saadaasha Allsanaag Gudoomiyaha Baarlamaanka oo dib u soo laabatay →